Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul u cambaareeyay afgambigii dhicisoobay ee Turkiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul u cambaareeyay afgambigii dhicisoobay ee Turkiga
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareyay isku day afgambi oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay dalka Turkiga, kadib markii koox ka mid ah ciidamada militeriga ay isku dayeen inay carqaladeeyaan xasiloonida iyo dimoqraadiyada Turkiga.
War-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in aan guuleysan isku daygaas afgambi, isla markaana laga adkaaday kooxdii sharwadayaasha ahaa ee ka dambeeyay, sida lagu yiri war saxaafadeedka.
“Waa wax aan la aqbali karin in la bedelo jidka dimoqraadiyada dadka reer Turki, wa anasiib daro kooxo sharwadayaal ka mid ah ciidamada inay isku dayaan inay Turkiga ay ku abuuraan rabshado iyo qalalaaso, waxaa ku faraxsanahay in kooxdaas laga adkaatay.
Madaxweynaha Xasab Sheekh ayaa sidoo kale sheegay inay si buuxda u taageerayaan dowladda madaxweyne Recep Tayyib Erdogan, isagoo ku booriyay in la ilaaliyo hey’adaha dastuuriga, isla markaana la ixtiraamo dimoqraadiyada, waxaana uu xusay in Turkiga uu ka mid yahay dalalka saameynta ku leh caalamka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tan iyo xalay taleefanka kula hadlayay madax kala duwan ee Turkiga, waxaana uu ka mid ahaa madaxda caalamka ee sida aadka ah uga soo horjeeday isku dayga afgambi ee dhacay.
Ugu dambeyn, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay dadweynaha reer Turkiga iyo madaxdooda inay xoojiyaan midnimadooda, xasiloonida, iyo kala dambeynta, islamarkaana xoojiyaan dhowrista dastuurka dalka Turkiga.